Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo booqday xarumo ganacsi oo ku gubtay dab barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Dhusamareeb | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo booqday xarumo ganacsi oo ku gubtay dab...
Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo booqday xarumo ganacsi oo ku gubtay dab barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Dhusamareeb
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaaa sheegaya in Madaxweyne kuxigeenka maamulkaasi Cali Dahir Ciid uu kormeeray xarumo ganacsi oo ku gubtay saakay magaalada Dhusamareeb ee Galmudug.
Waxa uu tilmaamay Cali Dahir Ciid Madaxweyne kuxigeenka maamulka Galmudug in madaxda maamulka Galmudug ay aad uga xun yihiin khasaaraha soo gaaray ganacsadii iska lahayd goobihii maanta dabka ku bas beelay.
Sidoo kale Waxa uu sheegay Cali Dahir Ciid in Lacag dhan 22,000 oo Dollar ugu deeqday Galmudug Gudiga ganacsatada ee ku howlan so iibinta Gadiidka Dab damiska oo ay yeelaato Magaalada Dhusamareeb, isagoo intaa ku daray in canshuur dhaaf loo sameyn doono.
Madaxweyne kuxigeenka Galmudug ayaa ganacsatada Galmudug gaar ahaan kuwa Dhusamareeb ugu baqay in loo gurmado ganacsatadii maanta hantidooda ku waayay dabkii maanta Dhuusamareeb ka kacay.
Previous articleMadaxweynaha Turkey iyo Faransiiska oo hadallo kulul isku dhaafsaday warbaahinta
Next articleAktarad ku tilmaantay shirkadda Bollywood-ka “jiko dad gaar ah u shidan”.